EURO 2016: Yuu Faransiisku ku beegmayaa wareegga siddeed dhammaadka, yaase loo doortay Man Of The Match? – Gool FM
(Saint-Denis) 26 Juunyo 2016 – Xulka qaranka Faransiiska ayaa kulankii dhawaa ee wareegga 16-ka koobka qaramada Yurub ee Euro 2016, waxa uu 2-1 uga adkaaday dhiggiisa Ireland.
Waxa ay marti geliyeyaasha tartanka qarammada Yurub ee Faransiisku sidaasi ugu gudbay wareegga siddeed dhammaadka Euro 2016, waxaana sida qorshuhu yahay uu la ciyaari doonaa midkooda xulalka England ama Iceland.
Xulalka England iyo Iceland ayaa wada ciyaari doona kulan ku tirsan wareegga 16-ka koobka qaramada Yurub, ciyaar ka dhici doonta magaalada Nice Isniin 27 June, xulkii soo adkaada ayaana wajihi doona xulka France oo goordhow xaqiijiyey inuu gaaray wareegga siddeed dhammaadka Euro 2016.
Faransiiska waxa uu xulkii soo adkaada England iyo Iceland ku wajihi doonaa wareegga siddeed dhammaadka Euro 2016 ciyaar ka dhici doonta magaalada Saint-Denis maalin Axad 3 bisha July.
Dhinaca kale weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa loo doortay laacibka kulanka (Man Of The Match), kaddib markii uu dhaliyey labada gool ee uu ku adkaaday xulkiisa Faransiiska.
FG: Codeynta Man Of The Match ma’ahan Gool FM ee waa shirkadda Carlsberg.
Euro 2016: Xulka Faransiiska oo iska xaadiriyey wareegga 8-da Koobka Qaramada Yurub markii ay guul soo laabasho ah ka gaareen Ireland + Sawirro